ဝါ၀ါ: Belated Birthday !
ဘလော့ဂ်ရေးတာ တခါမှစာအများကြီး မရေးဖူးဘူး... ဘာရေးရမှန်းလဲမသိဘူး... ရေးမတတ်တာလဲ ပါတာပေါ့နော်.. ဘလော့ဂ်မိတ်ဆွေတွေ ရေးထားကြတာ အားရစရာကြီး .. ဖတ်လို့တောင် မနိုင်ဘူး...
သူငယ်ချင်း (မမိုးမိုး) က ပြောတယ်... ဘာမှလဲမရေးဘူးတဲ့.. နည်းနည်းပါးပါးရေးပါတဲ့... အားပေးနေတယ်ပေါ့လေ..ဟဲဟဲ..အဲဒါကြောင့်စမ်း ရေးကြည့်မယ်လို့... ဘာရေးရမလဲ စဉ်းစားတော့ ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ကို ရေးရမလားလို့.. အမှတ်တရ အနေနဲ့ပေါ့.. မွေးနေ့ကတော့ လွန်သွားပါပြီ...ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့မှာ ဘာလုပ်ရမလဲလို့.. ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ ရွှေတိဂုံ ဘုရားသွားတယ်.. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နေရာစုံ လျှောက်လည်ကြတယ် ၊ သူငယ်ချင်းတွေကို မုန့်လိုက်ကျွေးတယ် .. သူငယ်ချင်းတွေက လက်ဆောင်ပေးတယ်..ပျော်စရာကြီးပေါ့နော်.. လက်ဆောင် ဖောက်ရတာ သိပ်ဝါသနာပါတယ်..
ဒီမှာကျတော့ ကိုယ်အလုပ်နဲ့ကိုယ် .. ချိန်းဖို့လဲမလွယ်ဘူးနော်.. ကိုယ်အားတယ်.. သူတို့ကမအားဘူး.. ကိုယ်မအားဘူး.. သူတို့ကအားတယ်.. အဲဒါနဲ့ တော်တော်လေးကို ချိန်းယူရတယ်.. ဒါကြောင့် ကိုယ့်မွေးနေ့ပွဲမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှမချိန်းဖြစ်ပါဘူး.. အိမ်မှာပဲ ဘဲကင် ၊ ကိတ်မုန့်နဲ့ ရေခဲမုန့် ပဲဝယ်စားလိုက်တယ်.. ကံကောင်းလို့ အဲဒီနေ့က ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပိတ်ရက်လေ ..
စားပြီးတော့ ဘယ်သွားရင်ကောင်း မလဲလို့စဉ်းစာရင် လူငယ်အများစုသွားတဲ့ ရှီးမင်သင်း(西門町）သို့ရောက်သွားပါတယ်..ရှီးမင်သင်းနေရာရဲ့ နေ့ခင်းမြင်ကွင်းလေးပါ..
မြေအောက်ရထားက ထွက်လာလို့ရှိရင် မြင်ရမယ့် ESLITE SHOPPING MALL ပါ..
လူငယ်တွေရဲ့စုစည်းတဲ့နေရာလေးပါ.. အဲဒီမှာဆို..အစုံရှိတယ်.. ရုပ်ရှင်ကြည့် မလား ၊ ပစ္စည်းဝယ်မလား ၊ တက်တူး ထိုးမလား ၊ ဂိမ်းဆော့မလား ၊ မုန့်စားမလား ၊ အလှပြင်မလား ၊ fancy ပစ္စည်းစတာတွေ ကြိုက်တာ ၀ယ်ယူလို့ရပါတယ်.. တခါတလေ စတိတ်ရှိုး လဲကျင်းပလေ့ ရှိပါတယ်.. လူကြီးပိုင်း တွေကို သိပ်မတွေ့ရ သလောက်ပဲ.. လူငယ်ရပ်ကွက်ဆိုတော့လေ..
BEAUTY SALON ရဲ့တရုတ်နာမည်ကို မြန်မာလို ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင် ပေါက်တတ်ကရဆံသဆိုင်ပါ.. ဒီဆိုင် လေးကို သတိထားမိတာက တခါတလေ လမ်းဘေးမှာ ကြော်ငြာ တစ်ရှူးထုပ်လေးတွေ ဝေပါတယ်.. နာမည် ကိုဖတ်ကြည့်တာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လေ.. ဒီဆိုင်လေးသို့သွားညှပ်ရဲကြပါရဲ့လား ???
Birthday Cake လေးတွေကိုလဲ ဘလော့ဂ်လည်ရင်း အဝသုံးဆောင်သွားကြပါနော်..
Posted by မီမီဝါ at 11:56 PM